Shil Baabuur Oo Dad Badan Galaaftay Oo Ka Dhacay Goday Iyo Magacyada Qaar Ka Mid Ah Dadkii Geeriyooday - Jigjiga Online
HomeSomalidaShil Baabuur Oo Dad Badan Galaaftay Oo Ka Dhacay Goday Iyo Magacyada Qaar Ka Mid Ah Dadkii Geeriyooday
Shil Baabuur Oo Dad Badan Galaaftay Oo Ka Dhacay Goday Iyo Magacyada Qaar Ka Mid Ah Dadkii Geeriyooday
Goday (Jigjigaonline) – Ugu yaraan saddex qof ayaa ku geeriyooday dad kale oo badanna waxa soo gaadhay dhaawacyo kaddib markii uu duleedka magaalada Goday ku rogmaday baabuur bas oo ay saarnaayeen rakaab.
Magaalada Goday ayaa ku jirta murugo iyo gurmad ay u fidinyaan dadka dhaawaca ah oo tiradoodu badan tahay, waxaana illaa hadda la xaqiijiyey inay dhinteen afar ruux oo saarnaa baska oo ay lahayd shirkadda FALCON.
Ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay ciidamada nabadgelyada waddooyinka oo ku saabsan sababta keentay shilkan iyo khasaaraha ka dhashay toona, hase yeeshee waxa cusbitaalka magaalada la dhigay meydka saddex qof ee geeriyootay, waxaanay la tacaalayaan dhaawacyointooda badan culus, kuwaas oo ilo-wareedyada qaarkood sheegayaan inay u baahan yihiin in loo qaado dhinaca magaalada Jigjiga.
Dadka shilkan ku geeriyooday ayaa qaar ka mid ah magacyadooda baraha bulshada lagu baahiyey, waxaana ku jira dad culimo ah oo ixtiraam ku lahaa bulshada dhexdeeda.
Saddexda qof oo magacyadooda la helay ayaa waxay kala yihiin:
Sheekh Macallin Haadi oo ka mid ahaa culimada gobolka Shabeelle
Cabdi Xayyi oo ahaa ganacsade
Dhinaca kale, waxa laga dayrinayaa xaaladda cusbitaalka magaalada Goday oo aan u diyaarsanayn inuu adeeg caafimaad oo habboon bixiyo.
Madaxweynaha Shiinaha oo markii ugu horraysay booqday Kuuriyada Waqooyi